बैंकहरुको झण्डै सवा २ खर्ब ऋण जोखिममा ! कुन बैंकको बढी ?
Posted: 2018-07-11 11:49:50
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गरेको लगानी नउठ्नेक्रम बढ्दै गएको ऋण असुली न्यायाधीकरणको तथ्यांकले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष (२०७४-७५) को असार २५ गतेसम्म विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले झण्डै सवा २ खर्ब ऋण उठाउन नसकेर ऋण असुली न्यायाधीकरणमा ऋणी बिरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
असार २५ गतेसम्म २ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड ४७ लाख १५ हजार २ सय १४ रुपैयाँ बराबरको ऋण उठाइदिन माग गर्दै न्यायाधीकरणमा मुद्दा परेको न्यायाधीकरणका प्रवक्ता भेषराज कोइरालाले बताए ।
विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले १ सय ९८ वटा मुद्दा न्यायाधीकरणमा दर्ता गराएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा यस्तो मुद्दा १०६ वटा मात्र परेको थियो । मुद्दा दर्ता गराउनेमा धेरै जसो वाणिज्य बैंक (क वर्गका बैंक) रहेका छन् ।
एनसीसी बैंक, एनआइसी एसिया, सिभिल बैंक लगायतले पटक पटक विभिन्न ऋणीका विरुद्द मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ ।
मुद्दा दर्ता गराउनेमा १५ वटा वाणिज्य बैंक, चार वटा विकास बैंक र तीन वटा फाइनान्स कम्पनी रहेका छन् ।
यो वर्ष चैत महिनामा सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भएको छ । यस महिना विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ३० वटा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् ।
यद्यपि, चालु आवको अन्तिम महिनामा पनि २५ गतेसम्म २३ वटा मुद्दा परेकाले यो महिना अझै केही दिन बाँकी रहेकाले बढ्न सक्ने प्रवक्ता कोइरालाको भनाई छ ।
यस्तै न्यायाधीकरणले ८५ वटा मुद्दाको फैसला गरिसकेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता कोइराला ऋण नतिर्दा हुँने दण्ड सजाय फितलो भएकाले पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी उठ्न गाह्रो परेको बताउँछन् ।
बैंकहरुले ऋण दिदा धितो राख्ने तर के कस्तो धितो राखेर ऋण लिएको छ नबुझी ऋण दिँदा बैंकहरुको आफ्नो लगानी डुब्न सक्ने खतरा बढ्दै गएको उनले बताए ।
बैंकहरु धितोले काम गर्न नसक्ने भएपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र न्यायाधीकरण धाउने गर्छन ।
न्यायाधीकरणमा आउने मुद्दा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको हुन्छ ।
पछिल्लो समय ऋण असुली न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेकाले एकातर्फ बैंकहरुको भाका नाघेको ऋणहरु एठ्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतर्फ न्यायाधीकरणप्रति विश्वास पनि बढ्दै गएको पुष्टि हुने कोइराला बताउँछन् ।
बैंकहरुले सवारी साधनमा गरेको लगानी पनि उत्तिकै फसेको छ यस्ता ऋणहरु उठाउन न्यायाधीकरणलाई पनि समस्या पर्ने गरेको कोइरालाले बताए ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण असुली ऐन २०५८ तथा नियमावली २०५९ अनुसार भाखा नाघेको ऋणको लागि पाँच वर्ष्भित्र निवेदन दिनुपर्नेछ ।
निवेदन प्राप्त भएको १५ दिनभित्र न्यायधिकरणले प्रतिवादीलाई आफ्नो सफाइको लागि सबुद प्रमाणसहित १५ दिनको म्याद दिन्छ ।
र, न्यायधिकरणले प्रति उत्तर प्राप्त भएको १५० दिन भित्र मुद्दाको किनार लगाइसक्नुपर्छ ।
न्यायधिकरणले ऋण असुल गरेको अवस्थामा भने उठेको ऋणको एक प्रतिशत शुल्क लिन्छ ।
एनएमबी बैंकको नाफा ९ प्रतिशतले बढ्यो
Posted: 2018-11-16 10:47:02
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - एनएमबी बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४९ करोड २४ लाख रुपैयाँले नाफा कमाएको छ । यो बैंकले कमाएको यस्तो नाफा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४ करोड ११ लाख रुपैयाँले बढेको ...
Posted: 2018-11-16 10:32:22
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत श्री मुक्ति क्षेत्र बिकास एवं स्थानीय संरक्षण समिति, मुस्ताङ्गलाई मुक्तिनाथ मन्दिर क्षेत्र भित्र निर्माण भएको नर्सिङ गुम्बा ...
निक्षेप वृद्धिमा फेरि एनआईसी एशियाको छलाङ
Posted: 2018-11-16 10:21:43
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - आक्रामक बजार विस्तारको नीति लिएर अघि बढेको एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा व्यवसाय विस्तारमा छलाङ मारेको छ । वित्तीय बजारमा निक्षेप संकलनको मात्रा ठप्प हुँदै ...
नबिल बैंकको नाफा ९३ करोड
Posted: 2018-11-16 10:12:56
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - नबिल बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९३ करोड ६१ लाख रुपैंया नाफा गरेको छ । बैंकले उक्त अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब कुल निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २८ अर्ब रुपैंया कर्जा प्रबाह गर्दा उक्त ...
सेञ्चुरी बैंकको नाफा २७ करोड
Posted: 2018-11-15 15:07:15
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले तीन महिनामै २७ करोड नाफा कमाएको छ । गत आर्थिक बर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १३ करोड नाफा कमाएको बैंकले यसपाली सोही अवधीमा २७ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो ...